Xaaf oo qoraal xasaasi ah oo ka dhan ah DF u direy Beesha Caalamka – Hornafrik Media Network
Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa farriin xasaasi ah oo ka dhan ah Dowladda Soomaaliya u diray Xubnaha Beesha Caalamka ee daneeyo Soomaaliya.
Qoraalka oo ku qornaa luuqadda Inigriiska ayuu Madaxweyne Xaaf Beesha Caalamka ugu sheegay inuu Wasaaradda Arrimaha Gudaha Federaalka iyo Dib u Heshiisiinta kala noqday wakaalashada.
Madaxweyne Xaaf ayaa sababta uu wakaaladda ugala noqday Wasaaradda Arrimaha Gudaha ku sheegay inay dowladda Soomaaliya ku takrifashay wakaalashada isla markaasna lagu fashilmay dhisidda Galmudug loo wada dhan yahay.
Dhanka kale Madaxweyne Xaaf ayaa waraaqda ku sheegay inuu magacaabay guddiga farsamada ee doorashada Galmudug isagoo dowladda Federaalka Soomaaliya ku eedeeyey inay Galmudug gelisay galqal siyaasadeed.
Warqadda uu Xaaf u diray Beesha Caalamka ayaa timid kadib markii uu dhawaan magaalada Gaalkacyo ka sheegay inay dowladda ku fashilmatay dhismaha maamulka Galmudug, isla markaasna ay xoog meesha uga saartay odayaashii lahaa saxiixa Xildhibaanada Galmudug.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka uu Xaaf u diray Beesha Caalamka oo ku qoran Luqadda English-ka.
1 22 696×944
Dani oo sharaxay sababta uu u saxiixi la’yahay xukunka raggii dilay Caa’isha Ilyaas